Zimbabwe Inocherechedza Zuva reVanorwara nePfungwa
HARARE — Mufaro wevanhu wekuva nechipatara chinobatsira vanorwara nepfungwa kwaMutare munguva pfupi iri kutevera wamiswa nehururumende apo yaramba kushandisa chipatara che Sakubva senzvimbo inokodzera kurapirwa pamwe nekuchengetera vanorwara nepfungwa.
Vachitaura neChishanu pahorongwa hwekucherechedzwa kwezuva revanhu vanorarama nehurwere hwepfungwa, kana kuti World Mental Health Day, gurukota rezvehutano, Va David Parirenyatwa, vati zvivakwa zviri pachipatara apa hazvikodzeri kushandiswa senzvimbo yekurapira vanhu.
Mashoko aVaParirenyatwa anotevera chikumbiro kubva kumukoti mukuru wechipatara cheSakubva District, Amai Sheila Chimbetete, chekuti pachipatara apa pange paine nzvimbo inorapirwa vanorwara nepfungwa.
Vachitaurawo pachiitiko ichi, mudzviti wedunhu reManicaland, VaFungai Mbetsa, vanoti nzvimbo inorapwa vanorwara yakakodzera sezvo varwere ava vari kuwanda zuva nezuva.
Asi VaParirenyatwa, avo vange vari munyarikani, vanoti mushure mekupangana mazano nevamwe vavo, vaona zvakakodzera kuti nzvimbo iri kuda kushandiswa nechipatara ichi seyekurapira vanorwara nepfungwa, inzi haikodzeri zvachose.
Vatiwo bazi ravo richatsvaga imwe nzvimbo yakakodzera yekurapira vanhu vane dambudziko repfungwa, uye nzvimbo yekuvachengetera.
VaLincoln Charimari, avo vanoshandira sangano rehutano repasi rose reWorld Health Organisation, WHO, vashorawo mamiriro akaita nzvimbo iyi vachiti inoda kugadziriswa kuti izochengeterwe vanorwara nepfungwa.
VaCharimari vanoti sangano ravo richaramba richidyidzana nehurumende yeZimbabwe kuitira kuti ribatsirikane mukusimudzira hutano hevanhu munyika.
Pari zvino chipatara ichi chinoendesa varwere vepfungwa kuHarare kuti vanorapiwa ikoko.
Zuva re World Mental Health Day, rinocherechedzwa pasi rose musi wa 10 Gumiguru, asi Zimbabwe yarangarira zuva iri neChishanu, sezvo musi waifanirwa kuitwa izvi, vakuru vakuru vainge vakabatikana.